PetrPikora.com on Mee 28, 2018
Drábské Ụlọ ndị remnants nke mbụ osisi na nnukwu ụlọ na sandstone nkanka na cadastral Dneboh na district nke Mlada Boleslav, 4 km n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Munich Hradiste. Ọ dị n'ugwu ebe nchekwa nke dị na Paradaịs Paradaịs, n'ókèala nke Europe site na NATURA 2000 na Příhrazské skály Nature Reserve. The nkume ike e wuru na n'ebe ugwu ihu n'elu ikpo okwu na-akpọ Castle n'ebe ịdị elu nke banyere 370 m (105-155 mita eruba nke osimiri Jizera). Echebewo ụlọ nche ahụ ebe 1958 dị ka akụkụ nke ihe ncheta omenala buru ibu, nke gụnyere akụkụ sara mbara nke mgbidi Hrad na nso Klamorna. Onye nwe ala ahụ nwere ụlọ mgbaba bụ Czech Republic, ọ bụ Forest Republic nke Czech Republic na-enye nlekọta na nlekọta maka ncheta ahụ.
E wusiri ike obibi nke na-amaghị aha e tọrọ ntọala site na ihe ochie na ndekọ ndusụk ini ke abụọ oge 13. na narị afọ, n'oge amalite ịchị ịrịba ọrụ hradišťských Cistercians. Drábské Ụlọ na nso Klamorna na e wusiri ike Old Castle Příhrazy dịkarịa ala ibido jere ozi dị ka onye nche ihe, na-echebe ebe obibi ndị mọnk n'ókèala na akụkụ Pojizerské ụzọ ụkwụ. Ọtụtụ mgbe ochie chọpụtara na-egosi ịdị adị nke nnukwu ụlọ ruo mgbe 14. na narị afọ na ubé na 15. na narị afọ, mgbe ọ na-atụle maka ọhụrụ n'oge Hussite agha.
A na-edekwa oghere ahụ a pịrị apị n'oge oge ochie ahụ site na petroglyph akụkọ ihe mere eme. Ihe odide si na 16. na 17. ọtụtụ narị afọ na ide ihe odide edepụtara na-enye ohere ka nzukọ nke ndị òtù nke ịdị n'otu na ọnụnọ nke ndị ụkọchukwu Utrakvistic kwe omume. Akụkụ nke ụfọdụ n'ime ihe ndọba nkume ahụ na nchịkwa nke ụlọ ahụ gbanwere nsị nke ájá ájá.
Castle e wuru na ise ma ọ bụ asaa sandstone nkanka iche site na warara gbawatụrụ agbawa. Na ọtụtụ etoju 15-40 m elu nkume na-echekwawo pịrị ohere iri abụọ dị iche iche ọrụ, ise residues corridors pịrị osisi ntọala mgbe asaa ụlọ na àkwà mmiri na ise awara awa trough evidencing anchoring osisi palisades. Na nsọtụ nke oké nkume nwekwara ike ikwu ụzọ osisi walkways n'etiti nkanka na-echekwawo dragee mmechi cracks. Na-achị dum layout bụ a oke osisi ụlọ elu-echebe n'ọnụ ụzọ nnukwu ụlọ nke a nkwusioru ma ọ bụ a drawbridge. Medieval n'ọnụ ụzọ e mere si n'ebe ọwụwa anyanwụ nke nkanka metụtara na-aga n'ihu nkume outcrop. The kasị ụlọ nke nnukwu ụlọ elu ahụ uka - ọdụ ụlọ na pịrị ịchụàjà, gụrụ na 1921.
Drábské světničky bụ njem nleta na-ewu ewu. Taa njem nleta ohere a na ala-sculpted rock mgbape bụ eleghị anya na 1830, na steepụ e akp na iri abụọ nke iri na abụọ na narị afọ, Club of Czechoslovak njem. Taa, akụkụ kachasị nke akụkụ elu nke ihe mgbagwoju anya jikọtara ya site na usoro nhazi na afara (nlekere nlegharị anya).
Njem nke ụlọ nche ahụ bụ n'efu ma na-agba ọsọ n'enweghị nduzi. Njem nlegharị anya na-amalite site n'ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ nkwụ, rụgharịrị na 2016. Akụkụ a nke ihe ncheta a nwere ike ịnweta ndị ọbịa site na 1 mgbe niile. April ruo 31. Ọktoba, n'ehihie, na njedebe ọnọdụ ihu igwe.
Ụzọ kachasị dị nso na nkume massif na-esote akara ngosi njem nleta na-acha anụnụ anụnụ na Kavčina maka ogige dị na Dneboh (0,6 km). Ụgbọ okporo ígwè kacha nso dị na Brezina nke dị na 070 Prague-Turnov dị na-acha odo odo nke dịpụrụ adịpụ site na nnukwu ụlọ igwe 2,5 kilomita.
Ógbè ugwu nke Drábské světničky na-etolite akụkụ ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke Příhrazská Highlands n'etiti ụlọ Na Krásné vyhlídce na Klamornou. A kọwawo nkume nkume abụọ dị kilomita na 111 Rocks nke 915 na-arịgo ụzọ.
N'okpuru ihe niile a na-akpọ Drábské světnička castle, a na-egbochi ihe omume ugwu nile ichebe ncheta omenala. Nke a na-emetụta ihe e depụtara na nchekwa data nke Czech ugwu Association: Drabske massif, partisan, Drabske kọlụm, anọ na-akwukwo klova na n'ebe ugwu na n'ebe ọwụwa anyanwụ mgbidi nke ụlọ elu drab.
Czech ParadiseDrábské ụlọ2000
Labský důl Nnukwu ugwu
Elekere 14 gara aga